site na nhazi na 20-04-17
Mgbe ụbọchị iri anọ nke China mere ememe ezumike mmiri ogologo oge, nke Covid-19 na-eduzi, Forsetra laghachiri azụ ma maliteghachi imepụta ihe na 20th nke Feb. Mgba ọkụ ahụ metụtara Coronavirus, ndị ọrụ ahụ enweghị ike ịrụgharị ọrụ zuru oke, na ndị na-ebubata anyị ihe enyemaka ezughi ezu. ...
Na June 19-21, 2019, Hangzhou Forsetra Roof Tile Co., Ltd sonyere na International Trade Week na Ghana.
site na nhazi na 20-04-08
Na June 19-21, 2019, Hangzhou Forsetra Roof Tile Co., Ltd sonyere na International Trade Week na Ghana. Anabatara ngwaahịa anyị nke ọma n'ihe ngosi ahụ ma ụlọ ọrụ mgbasa ozi mpaghara obodo ahụ gosipụtara. Henry, onye njikwa ngalaba nke Oversea, dị ka onye nnọchi anya ụlọ ọrụ na-egosipụta, shar ...
Hangzhou Forsetra Roof Tile Co., Ltd keere aka na azụmaahịa mba ụwa na Ghana
site na nhazi na 20-01-09
Na June 19-21, 2019, Hangzhou Forsetra Roof Tile Co., Ltd sonyere na International Trade Week na Ghana. Anabatara ngwaahịa anyị nke ọma n'ihe ngosi ahụ ma kọọ ya na nnukwu mgbasa ozi mpaghara. Onu ogugu ndi mmadu gosiputara oke mmasi banyere ngwa ahia ha na ndi…